Fanononana 16 Shel Silverstein izay hahatonga anao hitsiky sy hieritreritra amin'ny fotoana mitovy - Quotes
Fanononana 16 Shel Silverstein izay hahatonga anao hitsiky sy hieritreritra amin'ny fotoana mitovy
Poeta, mpanao sariitatra ary mpanoratra ny ankizy malaza indrindra i Shel Silverstein izay boky sy tononkalo nomeny voninahitra ny fotoam-pandriana an-tapitrisany erak'izao tontolo izao.
Namboariny tamim-pitandremana ny asany tsirairay avy, tsy nandany litera iray na nanampy zavatra tsy ilaina akory. Ho an'ny ankizy iray, ny fampiasan'i Shel tamim-pahakingana ny teny anglisy dia nandoko sary mazava tsara tao an-tsain'izy ireo tamin'ny gadon-kira sy rima ao aminy.
Amin'ny maha olon-dehibe anao dia ho afaka hankasitraka bebe kokoa ny halaliny sy ny dikany ianao izay manamboatra ny asany sy ny lesona azontsika rehetra ianarana avy amin'izy ireo.
Ireto misy 16 amin'ireo teny nindramina sy tononkalo Shel Silverstein tsara indrindra:
Manaova sary adala,
Manorata tononkalo mihetsiketsika,
Mihirà hira mimenomenona,
Sisioka amin'ny alàlan'ny tohotrao.
Manaova dihy loony-goony
'Miampita ny gorodon'ny lakozia,
Mametraha zavatra adaladala eo amin'izao tontolo izao
Mbola tsy teo izany teo.
- Jiro ao amin'ny tafiotra
Miavaka ianao eto amin'ity tontolo ity ary tokony avelanao hamirapiratra mamirapiratra ny fahazavanao tokana mba ho hitan'ny hafa. Aza manafina ny tenanao, mifanaraka amin'ny fenitry ny fiarahamonina. Aoka ianao ary handray anjara amin'izao tontolo izao - dia hankasitraka anao bebe kokoa noho izany.
Mihainoa Mustn’ts, anaka, mihainoa ny Donts.
Henoy ny tsy tokony hatao, ny Impossibles, ny Won Won.
Henoy ny Never Haves, dia henoy akaiky aho.
Mety hitranga ny zavatra rehetra, anaka, mety hisy ny zavatra rehetra.
- Aiza no hiafaran'ny sisin-dalana
Aza avela olon-kafa hilaza aminao izay tsy azonao atao na tsy azonao atao. Ataovy avo ny masonao ary aza mitsahatra mampatsiahy ny tenanao fa mahavita na inona na inona ianao.
Tsy hilalao amin'ny ady tug o ’aho.
Aleoko milalao ady «hug»,
Izay ifamihanan'ny rehetra
Raha tokony hisintona,
Izay mihomehy ny rehetra
Ary mihorona eo amin'ny karipetra,
Izay rehetra manoroka,
Ary mitsiky ny rehetra,
Ary ny olon-drehetra mamihina,
Ary mandresy ny rehetra.
Ny fikarakarana, ny hatsaram-panahy ary ny fiaraha-miasa dia mandeha lavitra mba hahazoana antoka fa samy hahazo ny tombony lehibe indrindra amin'ny fiainana isika. Fenoy ireo andronao ireo ny andronao - na dia tsy azo ihodivirana aza ny fifanolanana.
Misy feo ao anatinao
Mibitsika tontolo andro,
“Tsapako fa mety amiko ity,
Fantatro fa tsy mety izany. ”
Tsy misy mpampianatra, mpitory teny, ray aman-dreny, namana
Na ny olon-kendry afaka manapa-kevitra
Inona no mety aminao - henoy fotsiny
Ilay feo miteny ao anaty.
- Ny feo
Henoy ny fihetsikao , ny fahatsapanao ny tsinainao, io feo kely io izay mitarika anao mankany amin'ny valiny izay mifanaraka indrindra amin'ny tanjonao sy ny soatoavinao. Aza avela ny hafa handray fanapahan-kevitra ho anao.
Ohatrinona ny tsara ao anatin'ny iray andro? Miankina amin'ny fomba fiainanao tsara ’. Ohatrinona ny fitiavana ao anaty namana? Miankina amin'ny habetsaky ny omenao azy ireo.
Ny soa hitanao sy iainanao eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy avy aminao voalohany. Aorian'izay vao azo itarafana izany. Ka miaina tsara ary manomeza tsara.
Tsy misy fiafarana faly.
Ny fiafarana no mampalahelo indrindra,
Ka omeo afovoany falifaly fotsiny aho
Ary fiandohana tena faly.
- Ny zavatra rehetra eo aminy
Rehefa tapitra ny raharaha dia voajanahary ny mahatsapa alahelo sy famoizam-po, koa araraoty tsara ny fotoana ary alentohy ao am-ponao izany, satria vetivety ny zava-drehetra ary hifarana ny zava-drehetra.
famantarana 10 ambony tadiaviny ianao
Ny maniry rehetra-unta
Layin 'Amin'ny Masoandro,
Talkin '' Bout The Things
Vitan'izy ireo i unta-unta-unta…
Saingy ireo rehetra maniry ny hanao izany
Mandositra sy miafina daholo
Avy amin'ny Little Little Did.
Tsy misy na inona na inona avy amin'ny fijerena ireo zavatra rehetra mety ho nety ho azonao, na mety ho nataonao - tsy nisy ankoatr'izany hanenina . Rehefa manao zavatra ianao vao afaka mijery ny fiainana lany.
Manana hoditra manga izy,
Ary nanao toy izany koa izy.
Nanafina azy io izy
Ary toy izany koa izy.
Nikaroka manga izy ireo
Ny fiainany manontolo tamin'ny,
Avy eo nandalo
Ary tsy nahalala mihitsy.
Raha tsy avelanao hahita an'izao tontolo izao mihitsy izao tontolo izao, dia mety tsy hahita ireo fifandraisana mahavariana indrindra ianao. Ny olona toa anao dia mety mandehandeha eny foana, fa raha tsy asehonao hoe iza marina ianao, dia tsy ho fantatr'izy ireo ny mijanona sy mampamangy.
Raha henjana ny lalana ary masiaka ny havoana,
mieritreritra ianao dia afaka tsy ampy fotsiny!
Ny fisainana tsara dia mety lasa lavitra manampy anao hanatratra ny nofinao sy ny hetahetanao, nefa tsy manakaiky ny herin'ny hetsika tsara akory izany. Indraindray dia mila mandohalika fotsiny ianao ary mametraka ny zava-drehetra tafiditra amin'ny fiainana.
Lazao amiko fa hendry aho,
Lazao amiko fa tsara fanahy aho,
Lazao amiko fa manan-talenta aho,
Lazao amiko fa mahafatifaty aho,
Lazao amiko fa mora tohina aho,
Tsara fanahy sy hendry
Lazao amiko fa tonga lafatra aho
Lazao ahy anefa ny MARINA.
Ny fahamarinana tokana dia sarobidy kokoa noho ny lainga rehetra voalaza rehetra. Rehefa tonga any amin'ireo tena tianao ianao dia mivonona ny hilaza azy ireo ny marina ary mifaly fa holazaina aminy ny marina ho setrin'izany.
Eo ambanin'ny tavako ivelany
Misy endrika tsy misy mahita.
Tsy dia mitsiky intsony,
Tsy dia azo antoka firy,
Saingy betsaka kokoa toa ahy.
Fantatsika rehetra fa marina izany, saingy tsy tadidintsika foana izany rehefa mifampiraharaha amin'ny olon-kafa. Aza adino velively fa eto ambanin'ny tany dia somary tsy milamin-tsaina sy mitebiteby isika rehetra.
Raha misy boky tianao hovakiana nefa mbola tsy voasoratra dia soraty.
Aza miandry olon-kafa hanova izao tontolo izao raha te hanao zavatra ianao dia ataovy ny tenanao. Soraty ny fiainanao manokana satria raha avelanao hanoratra azy ho anao ny hafa, dia tsy ho tianao mihitsy ilay tantara.
Eny, hoy ny Yesees tamin'izay
Nilaza ny zavatra rehetra ny Noees
Raha tsy hoe voaporofo sy notsapaina.
Ka ny Yesees rehetra dia maty fatratra loatra
Ary ny Noees rehetra maty tamin'ny tahotra,
Saingy mieritreritra ny Thinkforyourselfees aho
Nivoaka tsara daholo.
Eny ary tsia dia tsy teny maloto - ampiasao am-pahendrena izy ireo rehefa mety ny fotoana. Tsy tokony hanaraka ny vahoaka fotsiny ianao ary handeha amin'izay lazain'izy ireo, fa tsy tokony hihazona ny fiainana noho ny fisalasalana misy koa. Mieritrereta ho an'ny tenanao ary manapa-kevitra.
… Raha tsy izany dia mbola tsy vita
Aza midika izany fa tsy azo atao…
Ny fanavaozana dia ny fo mandrobon'ny fandrosoana, koa aza mieritreritra (ary aza avela hiteny aminao ny hafa) fa tsy afaka manao zavatra ianao satria mbola tsy natao teo aloha. Meteza ho mpisava lalana, manamboara lalana tsy mbola nalehan'ny olona. Minoa fa azo atao izany ary mahay ianao.
Nisotro tamin'ny tavoahangy antsoina hoe DRINK ME izy
Ary nitombo avo dia avo izy,
Nihinana tamin'ny lovia antsoina hoe TASTE ME izy
Ary nidina nitotongana kely izy.
Ary noho izany dia niova izy, raha olon-kafa kosa
Tsy nanandrana nothin 'mihitsy.
Raha tsy manandrana zava-baovao mihitsy ianao, dia tsy hanova, hitombo ary hiaina ireo zava-mahatalanjona eraky ny tontolo manodidina anao mihitsy. Aza manafina ny tenanao ary miaina fiainana feno fahafaham-po - tadiavo ny vaovao sy ny tantara ary avelao hanitatra ny sainao izany.
Nataoko toy ny lanezy
Toy ny tonga lafatra.
Nieritreritra aho fa hitahiry izany ho toy ny biby,
Ary avelao hatory amiko io.
Namboariko akanjo lava
Ary ondana iray ho an'ny lohany.
Avy eo omaly alina dia nandositra izy,
Fa ny voalohany - Nandena ny fandriana izy io.
Ny zava-drehetra amin'ny fiainana dia mandalo. Tsy misy maharitra mandrakizay. Tsy afaka mitazona zavatra tsy natao hotehirizina ianao, fa afaka mankafy azy ireo mandritra ny faharetany.
Raha tianao ireo dia azonao antoka fa ho tianao ny fanangonana ataonay Winnie-the-Pooh nitanisa , Fitanisa Roald Dahl , Alice in Wonderland nalaina , ary Wind in the Willows .
ampangaina ho sandoka amin'ny vady
manana lefona britney ve ny zanany
dia lil nas x manambady
ny dingana enina amin'ny fitiavana azy
trish stratus lovan'ny mpanjaka 2018